Ny trano fandraisam-bahiny Hawaii dia mitatitra ny fihenan'ny fidiram-bola sy ny fivezivezena
Home » Hawaii Travel News » Ny trano fandraisam-bahiny Hawaii dia mitatitra ny fihenan'ny fidiram-bola sy ny fivezivezena
Tamin'ny volana septambra 2020, ny trano fandraisam-bahiny Hawaii manerana ny faritra dia nitatitra ny fihenan'ny fidiram-bola isaky ny efitrano misy (RevPAR), ny salan'isa isan'andro (ADR), ary ny toeram-ponenana raha oharina tamin'ny volana septambra 2019 satria ny fizahan-tany dia mbola nisy fiantraikany lehibe tamin'ny Covid-19 areti-mifindra.
Araka ny Tatitra momba ny Hawaii Hotel Performance navoakan'ny Hawaii's Authority (HTA) Diviziona fikarohana, RevPAR nanerana ny fanjakana dia nihena hatramin'ny $ 29 (-85.0%), ny ADR dia nidina hatramin'ny $ 149 (-39.5%), ary ny onenana dia nitotongana ho 19.6 isan-jato (-59.4% isan-jato) tamin'ny volana septambra.
Ny valin'ny tatitra dia nampiasa angon-drakitra namboarin'ny STR, Inc., izay manao ny fanadihadiana lehibe indrindra sy feno momba ny trano fandraisam-bahiny ao amin'ny Nosy Hawaii.
Tamin'ny volana septambra, ny fidiram-bolan'ny trano fandraisam-bahiny Hawaii dia nidina 91.4 isan-jato hatramin'ny 26.6 tapitrisa dolara. Ny filan'ny efitrano dia 85.8 isan-jato ambany noho ny vanim-potoana iray lasa izay. Nihena 43.0 isan-jato isan-taona ny famatsiana efitrano. Toerana maro no nakatona na nihena ny fiasa nanomboka ny volana aprily. Nandritra ny volana septambra, ny mpandeha rehetra tonga avy any ivelan'ny fanjakana, ary koa ny nivezivezy nanerana ny faritany Kauai, Hawaii, Maui, ary Kalawao (Molokai), dia voatery nitandrina quarantine 14 andro tsy maintsy atao. Raha ny kaonin-trano ho an'ny volana septambra 2020 dia nisaina nifototra tamin'ny famatsiana ny efitrano nanomboka ny volana septambra 2019, dia 11.2 isan-jato ny isan'ny olona ao anatin'io volana io.
Ny sokajin'ireo fananana trano fandraisam-bahiny rehetra any Hawaii dia nitatitra ny fatiantoka RevPAR tamin'ny volana septambra raha ampitahaina tamin'ny herintaona lasa izay. Ny fananana Class Luxury dia nahazo RevPAR $ 15 (-95.4%), miaraka amin'ny ADR amin'ny $ 266 (-41.6%) ary ny haben'ny 5.6 isan-jato (-65.2 isan-jato isan-jato). Ny fananana kilasy Midscale & Economy Class dia nahazo ny RevPAR avo indrindra ($ 42, -67.5%) teo anelanelan'ny kilasy noho ny haben'ny 36.3 isan-jato (-44.5 isa isan-jato).
Ny kaontinanta efatra nosy rehetra dia nitatitra ny RevPAR ambany sy ny mponina ao aminy. Ny trano fandraisam-bahiny Oahu dia nitarika ny fanjakana ho an'ny RevPAR tamin'ny $ 33 (-83.1%) tamin'ny volana septambra, ary ny ADR dia $ 152 (-32.6%) ary ny trano onenana 21.3 isan-jato (-63.6 isanjato isan-jato).
Ny hotely Waikiki dia nahazo $ 28 (-85.5%) tao amin'ny RevPAR niaraka tamin'ny ADR $ 148 (-33.8%) ary ny haben'ny 18.7 isan-jato (-67.0% isa).
Ny trano fandraisam-bahinin'i Maui County dia nahazo RevPAR $ 24 (-89.4%), miaraka amin'ny ADR amin'ny $ 149 (-52.9%) ary ny haben'ny 16.5 isan-jato (-56.6 isanjato isan-jato).
Ny trano fandraisam-bahiny amin'ny nosy Hawaii dia nitatitra ny RevPAR $ 27 (-82.1%), miaraka amin'ny 20.9 isan-jato (-48.0% ny isan-jato) ary ny ADR dia $ 130 (-41.0%).
Ny trano fandraisam-bahiny Kauai dia nahazo RevPAR $ 23 (-86.2%) tamin'ny volana septambra, niaraka tamin'ny ADR $ 152 (-36.2%) ary ny haben'ny 15.1 isan-jato (-54.5 isa isan-jato).
Fampitahana amin'ireo tsena amerikana ambony
Raha ampitahaina amin'ny tsena amerikana ambony indrindra nandritra ny sivy volana voalohany tamin'ny taona 2020, ny Nosy Hawaii dia nahazo ny RevPAR avo indrindra $ 116 (-49.2%) narahin'ny tsenan'i Miami / Hialeah tamin'ny $ 95 (-36.3%) ary ny San Francisco / San Mateo tamin'ny $ 85 (-59.7%). Hawaii koa dia nitarika ny tsenan'i Etazonia tamin'ny ADR tamin'ny $ 273 (-2.8%) narahin'i Miami / Hialeah sy San Francisco / San Mateo. Tampa / St. Petersburg, Florida dia nitazona ny firenena tamin'ny fananana 51.2 isan-jato (-22.6 isanjato isanjato), narahin'i San Diego sy Los Angeles / Long Beach, Kalifornia. Ny nosy Hawaii dia laharana faha-17 amin'ny honenana amin'ny 42.5 isan-jato (-38.8 isa isan-jato).
Fampitahana amin'ny tsena iraisam-pirenena
Raha ampitahaina amin'ny tanjona “masoandro sy ranomasina” iraisampirenena, ny kaominin'i Hawaii dia tao amin'ny tapany ambony amin'ilay vondrona ho an'ny RevPAR isan-taona. Ny trano fandraisam-bahiny any Polinezia frantsay no mitana ny laharana avo indrindra amin'ny RevPAR amin'ny $ 242 (-38.7%) arahin'ny Maldives, County Maui ($ 167, -46.3%), Aruba, ny nosy Hawaii ($ 113, -44.5%), Kauai ($ 103, -49.8 %) sy Oahu ($ 98, -51.3%).
Ny Maldives dia nitarika tamin'ny ADR tamin'ny $ 745 (+ 39.7%) tao anatin'ny sivy volana voalohany tamin'ny taona 2020, narahin'i Polynesia frantsay sy ny faritanin'i Maui (419 $, + 5.5%). Kauai ($ 274, -3.3%) ny nosy Hawaii ($ 255, -3.2%), ary i Oahu ($ 224, -6.2%) no laharana fahenina, fahafito ary fahavalo. Ny nosy Hawaii dia nitazona tany amin'ny toerana itodian'ny masoandro sy ny ranomasina isan-taona (44.3%, -33.0 isan-jato isan-jato), narahin'i Oahu (43.9%, -40.7 isan-jato isan-jato), Polinezia frantsay, County County Maui (39.9%, - 38.5 isa isan-jato) ary Kauai (37.8%, -34.9 isa isan-jato).